Ko Sai, Author at Kanaung News - Page2of 61
သင့်အချစ်ရေးကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်တဲ့ စကား (၅) ခွန်း ဘယ်အချစ်ရေးမှာမဆို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပိုမိုနီးစပ်ခြင်းကနေ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို နီးစပ်မှုမျိုးရစေဖို့ ဆိုတာကလည်း တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်တော်တော်လေး သိလာမှပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုနီးစပ်ချစ်ခင်မှုတွေ မရခင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေ လွဲသွားရင်တော့ အခြေအနေက စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့။ နားလည်မှုလွဲစေတဲ့အထဲမှာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေကြောင့်လည်း ပါနေတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်အချစ်ရေးကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တဲ့ စကား (၅) ခွန်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ၁။ဘာ့ကြောင့်လဲ။ ဘာလို့လဲ၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာကတော့ ပြောရတာ လွယ်ပါတယ်။ စကားလေးက တစ်ခွန်းလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ လူတစ်ဖက်သားကို အခက်အခဲ အဖြစ်စေဆုံး မေးခွန်းဖြစ်နေတတ်ပါ တယ်။ တစ်ဖက်လူကို အမြင်မကြည်တဲ့အခါ […]
တစ်နေ့တာလုံး အဆင်ပြေနေစေမယ့် မနက်ခင်းအလေ့အကျင့်များ
တစ်နေ့တာလုံး အဆင်ပြေနေစေမယ့် မနက်ခင်းအလေ့အကျင့်များ အလုပ်လုပ်ရာမှာ အရာရောက်ဖြစ်ထွန်းစေဖို့နဲ့ တစ်ပတ်လုံး အားအင်တွေ ရရှိစေဖို့အတွက် ထိရောက်တဲ့ မနက်ခင်း အလေ့အကျင့်လေးတစ်ခုခု ထူထောင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိတစ်နေ့တာကို အစပြုပုံက မိမိအလုပ်ကို အချိန်မီပြီးမြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နေ့လုံး အလုပ်စားပွဲမှာ အချိန်ကုန်ခြင်း အဲဒီ ခြားနားချက်နှစ်ခု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်မှုပေးမယ့် မနက်ခင်း အလေ့အကျင့်လေး တချို့မှာတော့ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ အလုပ်တွင်အောင်ဆိုပြီး အိပ်ချိန်ခြိုးခြံချွေတာတာ ခဏအတွင်း အဆင်ပြေကောင်း ပြေနိုင်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ သိပ်တော့ မကောင်းလှပါ။ အိပ်ရေးမဝခြင်းက အကျိုးယုတ်ခြင်းနဲ့ အလုပ်ပြုတ်တဲ့ ရှုံးဆုံး နစ်နာမှုသာ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ မိမိစိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဦးစားပေးပြီး တစ်ည အနည်းဆုံး ၇ နာရီကနေ ၉ […]
“ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်၏အကျိုး” ဝေယျာဝစ္စလုပ်ဆောင်သူများအတွက်တော့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ တရားတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီတရားတော်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာ နာယူခွင့်ရသည့်အချိန်မှာ အရင်ကထက် ဝေယျာဝစ္စလုပ်ငန်း၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်ချင်စိတ် ပို၍လုပ်ဆောင်ခွင့်ရအောင် ကြိုးစားကြမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရတနာသုံးပါး၏ ဝေယျာဝစ္စ၊ မိဘနှစ်ပါး၏ဝေယျာဝစ္စ၊ ဆရာသမား၏ဝေယျာဝစ္စများကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြသည့် ရဟန်းရှင်လူ၊ အမျိုးကောင်းသား အမျိုးကောင်းသမီးများအတွက် ရရှိမည့် အကျိုးတရားကား များပေစွ။ သူတစ်ပါး၏ အလှူဒါနပြုလုပ်သည့်အခါ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်များ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြသည့် သူများအတွက် အကျိုးတရားသည်လည်း အနန္တပင်။ ဘုရားရောက်သည့်အခါ ဝေယျာဝစ္စဆောင်ရွတ်ကြသူများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများရောက်သည့်အခါ ဝေယျာဝစ္စဆောင်ရွတ် ကြသူများ၊ ဓမ္မသဘင်များ၊ အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ စသည့် လောကအတွက် သာသနာအတွက် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဝေယျာဝစ္စဆောင်ရွတ်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသူများ အတွက် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ တရားတို့ကား တိုင်းတာပြ၍ပင် မရလောက်အောင်ပင် ကြီးမားပေစွ။ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်နဲ့ ပတ်သက်၍ ဝိပဿီမြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်၌ ဝေယျာဝစ္စလုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ […]
“ခလေးကိုရိုက်နှက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်များ” ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်ကျင်မှာ အမြဲတွေ့ရတာကတော့ ခလေးက နည်းနည်း အပြစ်လုပ်တာနဲ့ ပြောဖို့ထက် လက် နဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် တုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွဲရိုက်တော့တာပါပဲ။ တစ်ချို့ကိစ္စတွေက နားလည်အောင်ရှင်းပြတာနဲ့ ရပါတယ် ရိုက်မှ ရင်ထဲစွဲပြီမှတ်မိတာပါမဟုတ်ပါ။ ရိုက်လိုက်မှပဲ ခလေးရဲ့ ရွဲတတ်တဲ့စိတ်ကို နိုးကြားလာအောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ ပြီးတော့ ခလေးကို ရိုက်လိုက်လို့ ကြောက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး ခလေးက တုတ်ကို ကြောက်တာပဲရှိတာပါ လူကို မကြောက်တတ်တော့ပါဘူး အရိုက်ခံရတဲ့ခလေး နဲ့ မိဘကြားမှာ ဆိုးကြိုးတွေ အများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မဆိုလိုတာက ခလေးကို သွန်သင်ဆုံးမလို့ မရဘူးလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခလေးတွေကို ရိုက်လို့တော့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒေါသတကြီး ဆွဲရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ ဘာလုပ်လို့ရိုက်တယ် ဘာကြောင့် အရိုက်ခံရတယ်ဆိုပြီး နားလည်အောင်ပြောစေချင်တာပါ ဒေါသကြောင့်ရိုက်ရင် […]
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းကလေးတွေအပေါ် မလုပ်သင့်သော ၁၄ ချက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းကလေးတွေအပေါ် မလုပ်သင့်သော ၁၄ ချက် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးကို မွေးပေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းမလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ်ဆိုတာဟာ မိန်းကလေးတွေသာသိပြီး ယောင်္ကျားဖြစ်သူက မသိတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာလည်း မိခင်လောင်း မိန်းကလေးအနေနဲ့လည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ မသိထားရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မူတွေ လွဲပြီး ပြသာနာတွေနဲ့ ကြုံရမှာ အမှန်ပါ။ ဒါကြောင့် မဖြစ်သင့်တဲ့ ပြသာနာတွေကို ကြိုတင်ပြီး သိအောင် မလုပ်သင့်သော အချက်လေးတွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၀၁. တစ်လိပ်သောက် သောက်လိုက်ဦးမယ်။ ဆေးလိပ်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းကလေးရဲ့ဘေးမှာ မသောက်သင့်ပါ။ ကလေးမှာ အဆုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေး ကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးလိပ်မသောက်သင့်ပါ။ သောက်ခဲ့သည်ရှိသော် ကလေးက ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၀၂. အရက်ကို […]
ကံ ကံ၏အကျိုး ကံဆိုတာ ကမ္မ ဆိုတဲ့ ပါဠိက ဆင်းသက်လာတဲ့ ပါဠိသက်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို အားလုံးနားလည်အောင် ပြောရရင် ကံ ဆိုတာ “အလုပ်”ပါ။ အလုပ်ဆိုတာ ကံပါ။ အလုပ်မကောင်းက ကံမကောင်းပါ။ ကံမကောင်းက အကျိုးပေး မကောင်းပါ။ အလုပ်ကောင်းမှ ကံကောင်းပါတယ်။ ကံကောင်းမှ အကျိုးပေး ကောင်းပါတယ်။ အေး – ကိုယ် ကံကောင်းလား မကောင်းလားဆိုတာ ဗေဒင်ဆရာတွေ နတ်ကတော်တွေ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်သူ သိနိုင်သလဲ။ မိမိကိုယ်တိုင် သိနိုင်ပါတယ်။ ကာယကံ အပြုမကောင်းရင် ဝစီကံ အပြောမကောင်းရင် မနောကံ အကြံမကောင်းရင် ကံမကောင်းပါ။ ကံမကောင်းရင် အကျိုးပေး မကောင်းပါ။ ကာယကံ အပြုကောင်းရင် ဝိပဿနာ ကုသိုလ်ကံရယ်လို့ အမျိုးမျိုးရှိလာပြန်ပါတယ်။ အဲဒီလောက်မှ […]